SAWIRO:- Ganacsiga Boosaaso oo maanta xirmay kadib cadaadis la saaray Ganacsatada. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSAWIRO:- Ganacsiga Boosaaso oo maanta xirmay kadib cadaadis la saaray Ganacsatada.
February 26, 2020 marqaan Faalloyinka, Puntland, Somali News 0
Inta badan ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa maanta xiran, iyadoo Boosaaso ay tahay xarunta ganacsiga Puntland.
Ganacsatada Boosaaso, ayaa ka cabanayaa canshuurta iibka, oo dhawaan la soo rogay, taas oo ku jirtay miisaaniyaddii uu ansixiyey Baarlamaanka Puntland.
Shacabka Boosaaso ayaa saaka oo Arbaco ah ku waabariistay goobaha ganacsiga oo xiran, sidoo kale Dekeda ayaa maalintii afraad waxaa taala alaabtii ganacsatada uga soo dagi jirtay.
Sidoo kale waxaa jira gaadiid kaantaroolka magaalada Boosaaso ugu xaniban canshuur.